ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်ပစ္စည်းတင်ထားသင့်သလား?
ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်မှာ အရုပ်တွေတင်တာ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေတင်တာ၊ အမွှေးနံ့သာ ပုလင်းတွေတင်တာ၊ ဖုန်းတင်တဲ့ စင်တွေတင်တာ၊ ပန်းအိုးလေးတွေတင်တာ၊ ဖန်စီပစ္စည်းအလှအပတွေ ဆင်တာ၊ အပေါ်ကနေ အခြားအစွပ် အအုပ်တွေအုပ်တာတွေ တော်တော်လေးတွေ့လာရပါတယ်။ ဟိုးတလောလေးကဆို နတ်ရုပ်တွေ၊ ပန်းတွေ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေကို ကားဒက်ဘုတ်အပြည့်တင်ပြီး ကိုးကွယ်ထားတာတွေ့လိုက်ရပြီးနောက် ဒီဆောင်းပါးလေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေတင်ထားသင့်သလားဆိုရင်တော့ လုံးဝ(လုံးဝ) ကိုတင်မထားသင့်ပါဘူး။ ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေတင်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်ပစ္စည်းတွေမတင်သင့်လဲ? တင်ထားရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ? ဆိုတာ ကျနော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်ပစ္စည်းတွေ မတင်သင့်လဲဆိုရင်တော့ ကားမှာတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ SRS AirBag (Supplemental Restraint System) ဆိုတဲ့ အသက်ကယ်လေအိတ်တွေကြောင့်ပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းပေါ်မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာ Airbag (လေအိတ်) တွေက အနည်းဆုံး ၂ လုံးကနေ ၄ လုံး၊ ၆ လုံး၊ ၈ လုံး အစရှိသည်ဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။ အခုခေတ် ဘယ်ကားမှာမဆို ကားရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ Driver နဲ့ Passenger အတွက် ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်မှာ Airbag ၂ ခုတော့ အနည်းဆုံးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီလိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ Airbag တွေနဲ့ ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လိုမဆီလျှော် မသင့်တော်ဘူးလဲဆိုတာသိဖို့၊ ကားမှာပါဝင်တဲ့ SRS airbag စနစ်တွေအကြောင်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။
SRS Airbag တွေ ဘယ်ချိန်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသလဲ ? ဘာကိုဆိုလိုသလဲ?
Airbag တွေကို 1980 ခုနှစ်နဲ့ 1990 ခုနှစ် အစောပိုင်းကားတွေမှာစတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမိသလောက်ဆိုရင်တော့ Driver Side Airbag ကို 1989 ခုနှစ်လောက်မှာ စတင်တပ်ဆင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ Passenger Side Airbag ကိုတော့ 1992 လောက်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ Side Airbag (ရှေ့ထိုင်ခုံနဲ့ နောက်ထိုင်ခုံကြား) ကိုတော့ 1996 လောက်မှာစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး Side Curtain Airbag (ရှေ့ထိုင်ခုံနဲ့ နောက်ထိုင်ခုံကြား အပေါ်ဖက်) ကိုတော့ 1998 လောက်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့တာပါ။ Knee Airbag (ရှေ့ဒက်ဘုတ် အောက်ခြေ) ကိုတော့ 2002 ခုနှစ်လောက်မှာမှ စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Rear Central Airbag System ဆိုပြီးလည်း ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရနိုင်တဲ့ စနစ်တွေကို အသုံးပြုနေပါပြီ။
SRS AirBag (Supplemental Restraint System) ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားတဲ့ အတားအဆီး အကာအကွယ်စနစ်ဆိုတာမျိုးပါ။ ဘာကြောင့်ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားတယ်လို့ဆိုရတာလဲဆိုရင် ကား Accident ဖြစ်ရင်၊ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် အဓိကအနေနဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးတာက လေအိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးတာက ထိုင်ခုံကခါးပတ်တွေပါ။ ခါးပတ်ပတ်ထားသည့်တိုင်အောင် အခြားထိခိုက်မှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းသွားအောင်လို့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်အနေနဲ့ လေအိတ်စနစ်တွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် (SRS) Airbag ဆိုပြီး ခေါ်တာပါ။
SRS Airbag စနစ်မှာပါဝင်တဲ့ အဓိကပစ္စည်း ၆ မျိုး
၁။ Crash Sensors
Airbag system မှာ လေအိတ်တွေပွင့်သင့်/မပွင့်သင့်ကို အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာက ဒီ Crash Sensors တွေပါပဲ။ ဒီကောင်လေးက ကားမောင်းနေတဲ့ အရှိန်အတွင်းမှာ ကားဟာဘယ်လောက် တုံ့ဆိုင်းသွားလဲ၊ ရပ်သွားသလဲဆိုတာမျိုးကို အာရုံခံနေတဲ့ပစ္စည်းပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကားဟာ 15mph ကနေစပြီး အဲဒီထပ်ကျော်တဲ့ ဘယ်အရှိန်နဲ့မဆို သွားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ အရာဝတ္တုတစ်ခုခုကို တိုက်လိုက်မိတယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီ Crash Sensors လေးတွေကနေ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာအချက်ပြပြီး လေအိတ်တွေကိုပွင့်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Airbag inflator
Airbag Inflator ဆိုတာ Airbag ဆိုတဲ့လေအိတ်ထဲကို လေတွေရောက်လာစေတဲ့ပစ္စည်းပါ။ အုန်းသီးထဲ အုန်းရေဘယ်သူထည့်သလဲ ကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားသလိုမျိုး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ဒီလေအိတ်ထဲကို လေတွေဘယ်လိုရောက်လာသလဲ၊ အရင်ကတည်းက ထိုးထည့်ထားတာလားဆိုပြီး စဉ်းစားစရာပါ။ တကယ်တော့ လေအိတ်ပွင့်သွားတယ်၊ လေအိတ်ဖောင်းလာတယ်ဆိုတာ အဲဒီအထဲကို လေတွေထိုးထည့်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုဖောင်းသွားအောင် ဓာတုဗေဒပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်စေပြီး လေအိတ်ဖောင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပါ။ ထပ်ရှင်းအောင်ပြောရရင် အဲဒီလေအိတ်ထဲမှာ Potassium Nitrate နဲ့ Sodium Azide ဆိုတဲ့ Chemical ပစ္စည်းတွေထည့်ထားပြီး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တာနဲ့ လေအိတ်ပွင့်သင့်တယ်လို့အချက်ပေးလိုက်တာကြောင့် အဲဒီဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဟာရောနှောသွားပြီး Nitrogen Gas တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲကာ လေအိတ်တွေကို အရမ်းလျင်မြန်တဲ့အချိန်အတွင်း ဖောင်းကားလာစေတာပဲ။ အဲဒီအချိန်လေးက ဘယ်လောက်မြန်သလဲဆိုရင် တချို့သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်တွေအရ 0.03 seconds လောက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားပါတယ်တဲ့။ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ပြောရရင် လူတစ်ယောက် မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်တဲ့ကြာချိန်က 0.1 ကနေ 0.3 Seconds အတွင်းလောက်ကြာပါတယ်တဲ့။ မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်တဲ့ ကြာချိန်ထက်ကို အဆပေါင်းများစွာလျင်လျင်မြန်မြန်ကြီးကို လေအိတ်ပွင့်စေတယ်ဆိုတာသတိထားရမှာပါ။
၃။ Airbag Control Unit
ဒီကောင်လေးက ကားတွေမှာအဓိကပါတဲ့ ECU (aka ECM) ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာဘောက်လိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်လေးကတော့ Airbag System အတွက် သီးသန့်ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ မိတ်ဆွေတို့ကားသော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီစနစ်ကအသက်ဝင်လာပြီး ကားမှာရှိတဲ့လေအိတ်စနစ်တွေ ကောင်းမွန်ရဲ့လား၊ အချိန်မီပွင့်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်လားဆိုတာကို စစ်ဆေးပေးတဲ့စနစ်ပါပဲ။ တကယ်လို့ မတော်တဆကားတိုက်မှုဖြစ်သွားတယ်၊ လေအိတ်တွေကလည်း ပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကား Airbag Control Unit တွေကို အသစ်လဲပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ မလဲပေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကနေ Airbag System ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုတာကို သတိပေးအချက်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Airbag Warning Light
ဒီအချက်ပြမီးလေးကိုတော့ ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ကားသော့ on လိုက်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ပြန်ပျောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သော့ဖွင့် စက်နှိုးပြီးသည့်တိုင် ဆက်လက်လင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကားရဲ့လေအိတ်စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ Diagnostics စက်တွေနဲ့ပြစ်ချက်ရှာဖွေပြီး အချိန်မီပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ အခါမှာ Airbag System တွေအသက်ဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၅။ Airbag Squib (or) Clock Spring (or) Spiral Cable
ဒီပစ္စည်းလေးကိုတော့ ဒီကကားလောကမှာ Airbag ခွေလို့ အခေါ်များကြပါတယ်။ ကားလက်ကိုင်ခွေရဲ့ အောက်မှာတည်ရှိပြီး ဝါယာကြိုးတွေကို အပြားလိုက်ခွေထားကာ နာရီလက်တံတွေကို ဘယ်ညာလိုက်ပါရွေ့လျားနိုင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီကောင်လေးတွေကလည်း Driver’s Side Airbag နဲ့ Control Unit တွေကြားချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပြီး အပျက်အများဆုံးပစ္စည်းလေးတွေပါ။ ကား Steering Gun ဖြုတ်ပြီး ပြုပြင်လဲလှယ်တဲ့အချိန် Steering ကို Lock လုပ်မထားရင် စတီယာရင်လည်ထွက်သွားပြီး ဒီကောင်လေးတွေ ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက် စတီယာရင်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီကောင်လေးကို ဖြုတ်ရတာမို့လို့ ပြန်လည်တပ်ဆင်တဲ့အခါ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ အပတ်ရေအတိုင်းမှန်ကန်စွာပြန်လည် မတတ်ဆင်တတ်ရင်လည်း ပျက်တတ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးပျက်သွားရင်အသိသာဆုံးအချက်က ကားဟွန်းတီးမရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားအောက်ပိုင်းတွေဖြုတ်ပြုပြင်ပြီး ကားဟွန်းတီးမရတာမျိုးဖြစ်သွားရင် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲ သေချာပြန်လည် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကားအချင်းချင်း တိုက်မှုဖြစ်သွားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခြားအရာဝတ္တုတစ်ခုခုကို ပြင်းထန်စွာတိုက်မိလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကားဒက်ဘုတ်ကိုခွဲပြီး ပွင့်ထွက်လာတတ်တဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေအိတ်ကြီးတွေပါ။ အဲဒီကောင်တွေကိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် Nylon fabric ဆိုတာနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေကို ကာဗာအနေနဲ့သုတ်လိမ်းထားပါသေးတယ်။ ဒီကောင်တွေကလည်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကားအမျိုးအစားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ သက်တမ်းတစ်ခုရှိပြီး သက်တမ်းလွန်သွားရင်တော့ Factory ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးအစားအလိုက် ပြန်လည်လဲလည် အသစ်တပ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ပေါက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ဆွေးမြည့်ယိုယွင်းနေနိုင်တာကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ချေများပါတယ်။
Airbag System ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
Airbag System တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေအကုန် စုပေါင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Crash Sensor က ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ တိုက်မှုဖြစ်သွားတဲ့အရှိန်နဲ့ပြင်းထန်မှုတွေကိုတွက်ဆပြီး Airbag Control Unit ကိုသတင်းပို့ပါတယ်။ အဲဒီကနေမှတစ်ဆင့် Airbag အတွင်းပိုင်းက Chemical ပစ္စည်းတွေကို Reaction တစ်ခုသက်ရောက်စေပြီး လေအိတ်တွေကိုဖောင်းကားပွင့်ထွက်စေပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Crash Sensors တွေကို Mass-Type Sensor နဲ့ Roller-Type Sensor တွေကိုအသုံးများကြပြီး ကားရဲ့အရှေ့ဘန်ဘာတန်းနဲ့ ကားအင်ဂျင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာတပ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကား Airbag System တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းနားလည်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုနားလည်သွားမယ်ဆိုရင် ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်မှာ ဘာကြောင့်ပစ္စည်းတွေ မတင်သင့်လဲဆိုတာ အလိုလိုနားလည်သွားလောက်ပါပြီ။ ကားလေအိတ်တွေ ပွင့်ထွက်လာတယ်ဆိုတာ အများထင်သလို လေအိတ်ထဲလေတွေအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အချိန် အကာအကွယ်ရဖို့အတွက် လေအိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာအရမ်းကိုလျင်မြန်တဲ့ အရှိန်နဲ့ဓာတုဗေဒပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီး လေအိတ်ဖောင်းကားပွင့်ထွက်လာတာမို့လို့ ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ လေအိတ်နဲ့အတူလွင့်စင်ထွက်ပြီး ကားအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ လူတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သည်အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေက လူတွေကိုမထိခိုက်မိဘူးဆိုရင်တောင် လေအိတ်ပွင့်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တာကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ကားအတွင်းပိုင်းကလူတွေအတွက် အကာအကွယ်တွေ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းတွေတင်အသုံးပြုတာဟာအလွန်မှားယွင်းပြီး အန္တရာယ်များလှတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုပါ။
နောက်တစ်ချက် အထူးသတိပေးမှုအနေနဲ့ပြောချင်တာက ကား Seat Belt ဆိုတဲ့ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပါ။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ အဓိကအကာကွယ်ပေးတာက ထိုင်ခုံခါးပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကားမှာပါတဲ့ လေအိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်အပေါ်မှာလည်းရှင်းပြထားသလို Airbag System ကို SRS Airbag လို့ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းကလည်း အဲဒါပါပဲ။ အသက်ကယ်အစီအစဉ်ရဲ့ အဓိကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တာ Airbag မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကောင်က အရန်အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပါ။
ကားထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ဘဲ ကားတိုက်မှုဖြစ်လို့ လေအိတ်တွေပွင့်တယ်ဆိုရင် ကားရဲ့ရွေ့လျားနေတဲ့အရှိန်နဲ့ လိုက်ပါနေတဲ့လူကို ရုတ်တရက် ဖမ်းထိန်းချုပ်ထားမယ့် ခါးပတ်မရှိတဲ့အတွက် အရှိန်ထိန်းမထားနိုင်ဘဲ ပြင်းထန်စွာပွင့်ထွက်လာတဲ့ လေအိတ်တွေနဲ့ စောင့်မိပြီး ဇက်ကျိုးတာ၊ နံရိုးတွေကျိုးတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် အသိမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်လည်း အမြန်လမ်းမှာကားမှောက်တာ လေအိတ်တွေပွင့်ပါလျှက် ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်မိလို့ သူ့ကားယာဉ်မောင်းရော၊ သူကိုယ်တိုင်ပါ အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ခါးပတ်မပတ်ရင် အချက်ပေးသံမမြည်အောင် ထိုးထားစရာ ခါးပတ်ခေါင်းအတုကို အသုံးပြုထားပုံရပါတယ်)
ဒါကြောင့် စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ ကားမောင်းမယ်၊ ကားစီးမယ်ဆိုရင်
၁။ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ကြပါ။
၂။ ကားဒက်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေတင်တဲ့အကျင့်ကို စွန့်လွှတ်ကြပါ။
၃။ အရှိန်တင်အလွန်အကျွံမောင်းနှင်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ သတိနဲ့မောင်းနှင်ကြပါလို့ စေတနာထားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး လိုရာခရီးပန်းတိုင်ကို အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရောက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
Yangon Payment Service (YPS) Card စနစ်ကို မကြာမီစတင်နိုင်တော့မည်ဟုဆို